မနခေငျြလို့ ထှကျသှားပါမယျဆိုရငျ အသာတကွညျနဲ့ လကျတှဲဖွုတျပေးနိုငျတဲ့အထိ ရငျ့ကကျြပါ - ONE DAILY MEDIA
ပိုငျရှငျရှိမှနျးသိသိရဲ့နဲ့ လိုခငျြနတေဲ့ မိနျးမတှကေို ကွညျ့ပွီးတော့ သနားတယျ ။ တကယျဆို သူတဈပါး ပိုငျဆိုငျပွီးသားအရာကွီးကို ဘာလို့ လိုခငျြရတာလဲလို့လဲ တှေးမိပွနျတယျ ။ ခဈြလို့ ကွိုကျလို့ ဆိုပွီး ဖွကွေတာတှလေဲ ရှိတယျ တခြို့က ခမျြးသာလို့ ပေးကမျးနိုငျလို့ ။
စိတျနဲ့တောငျ မပဈမှားသငျ့တဲ့ အရာကွီးပါ ။ ဒု တ န သော တဲ့ မကွားဖူးကွတာလား ဒါမှမဟုတျ ကွောကျပဲမကွောကျကွတာလား မေးကွညျ့ခငျြမိတယျ ။ စကားလုံး အသုံးအနှုံးရိုငျးရိုငျးနဲ့ ရပျကှကျစကား ပွောရရငျ ယောကျြား အဲ့သလောကျ ရှားသလားပေါ့ ။
အမိ . . . မှတျထားပါ ။ ဒီနေ့ သူတဈပါးမိသားစုကို မကျြရညျပေါကျကွီးငယျ ကပြွီး စိတျဆငျးရဲရအောငျလုပျရငျ တဈနေ့ ကိုယျ့အလှညျ့ရောကျရငျလဲ ပြျောရလိမျ့မယျလို့ မထငျနဲ့ ။ သူတဈပါးမိသားစုကို ပွိုကှဲအောငျလုပျရငျ တဈနေ့ ကိုယျတညျဆောကျထားတဲ့ မိသားစုလဲ တညျမွဲလိမျ့မယျလို့ မထငျနဲ့ ။ ဒါတှဟော . . . ကြိနျစာမဟုတျဘူး မနာလိုတာလဲ မဟုတျဘူး သဘာဝတရားကွီးက အလိုလို ဒဏျပွနျလာတတျတဲ့ ၀ဋျသကျသကျပါ ။
ကိုယျ့ ဇနီးမယားကို ပဈပွီး နောကျမီးလငျးတဲ့ ယောကျြားက အမိလကျထဲ ရောကျရငျလဲ ဖောကျပွားမှာပဲ အဲ့ဒီအခြိနျအခါတှေ ရောကျခဲ့တဲ့အခါ တဈခြိနျက ကိုယျငိုခဲ့ရတဲ့ ရကျတှကေို စာနာပါလိမျ့မယျ ။ အဲ့ဒီအခြိနျတှေ ရောကျမှ ငါမှားလခွေငျးဆိုတဲ့ နောငျတတှေ ရှိလာတဲ့အခါလဲ ​ခံနိုငျရညျရှိဖို့ပဲ ကွိုးစားပါ ။
တခြို့တှကေတြော့ . . . နောငျတရဖို့ဆိုတာဝေး . .. မာနျတကျပွတာတှေ ပွီးတော့ သူမြားပိုငျထားတဲ့အရာကို ကိုယျက လုယူထားတော့ ကိုယျ့ဆီက ပွနျပွီး လုယူသှားမှာကွောကျတဲ့စိတျနဲ့ ပူလောငျရတာတှေ အမြားကွီးပဲ ။
ဖွဈနိုငျရငျလေ . . . . ကိုယျ့အတှကျ သီးသနျ့ဖွဈပျေါလာတဲ့လကျကိုပဲ ဆှဲပါ မနခေငျြလို့ ထှကျသှားပါမယျဆိုရငျ အသာတကွညျနဲ့ လကျတှဲဖွုတျပေးနိုငျတဲ့အထိ ရငျ့ကကျြပါ ။ တဈပါးသူနဲ့ ပွိုငျပွီး လုယူမှ ရတဲ့အရာတှဆေို ကိုယျ့ဘကျက အရငျဆုံး စှနျ့လှတျလိုကျတာပဲ ကောငျးပါတယျ ။
ပိုင်ရှင်ရှိမှန်းသိသိရဲ့နဲ့ လိုချင်နေတဲ့ မိန်းမတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ သနားတယ် ။ တကယ်ဆို သူတစ်ပါး ပိုင်ဆိုင်ပြီးသားအရာကြီးကို ဘာလို့ လိုချင်ရတာလဲလို့လဲ တွေးမိပြန်တယ် ။ ချစ်လို့ ကြိုက်လို့ ဆိုပြီး ဖြေကြတာတွေလဲ ရှိတယ် တချို့က ချမ်းသာလို့ ပေးကမ်းနိုင်လို့ ။
စိတ်နဲ့တောင် မပစ်မှားသင့်တဲ့ အရာကြီးပါ ။ ဒု တ န သော တဲ့ မကြားဖူးကြတာလား ဒါမှမဟုတ် ကြောက်ပဲမကြောက်ကြတာလား မေးကြည့်ချင်မိတယ် ။ စကားလုံး အသုံးအနှုံးရိုင်းရိုင်းနဲ့ ရပ်ကွက်စကား ပြောရရင် ယောက်ျား အဲ့သလောက် ရှားသလားပေါ့ ။
အမိ . . . မှတ်ထားပါ ။ ဒီနေ့ သူတစ်ပါးမိသားစုကို မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ် ကျပြီး စိတ်ဆင်းရဲရအောင်လုပ်ရင် တစ်နေ့ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ရင်လဲ ပျော်ရလိမ့်မယ်လို့ မထင်နဲ့ ။ သူတစ်ပါးမိသားစုကို ပြိုကွဲအောင်လုပ်ရင် တစ်နေ့ ကိုယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ မိသားစုလဲ တည်မြဲလိမ့်မယ်လို့ မထင်နဲ့ ။ ဒါတွေဟာ . . . ကျိန်စာမဟုတ်ဘူး မနာလိုတာလဲ မဟုတ်ဘူး သဘာဝတရားကြီးက အလိုလို ဒဏ်ပြန်လာတတ်တဲ့ ၀ဋ်သက်သက်ပါ ။
ကိုယ့် ဇနီးမယားကို ပစ်ပြီး နောက်မီးလင်းတဲ့ ယောက်ျားက အမိလက်ထဲ ရောက်ရင်လဲ ဖောက်ပြားမှာပဲ အဲ့ဒီအချိန်အခါတွေ ရောက်ခဲ့တဲ့အခါ တစ်ချိန်က ကိုယ်ငိုခဲ့ရတဲ့ ရက်တွေကို စာနာပါလိမ့်မယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်တွေ ရောက်မှ ငါမှားလေခြင်းဆိုတဲ့ နောင်တတွေ ရှိလာတဲ့အခါလဲ ​ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ပဲ ကြိုးစားပါ ။
တချို့တွေကျတော့ . . . နောင်တရဖို့ဆိုတာဝေး . .. မာန်တက်ပြတာတွေ ပြီးတော့ သူများပိုင်ထားတဲ့အရာကို ကိုယ်က လုယူထားတော့ ကိုယ့်ဆီက ပြန်ပြီး လုယူသွားမှာကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ ပူလောင်ရတာတွေ အများကြီးပဲ ။
ဖြစ်နိုင်ရင်လေ . . . . ကိုယ့်အတွက် သီးသန့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ကိုပဲ ဆွဲပါ မနေချင်လို့ ထွက်သွားပါမယ်ဆိုရင် အသာတကြည်နဲ့ လက်တွဲဖြုတ်ပေးနိုင်တဲ့အထိ ရင့်ကျက်ပါ ။ တစ်ပါးသူနဲ့ ပြိုင်ပြီး လုယူမှ ရတဲ့အရာတွေဆို ကိုယ့်ဘက်က အရင်ဆုံး စွန့်လွှတ်လိုက်တာပဲ ကောင်းပါတယ် ။
အစကောငျးခဲပမေယျ့ အဆုံးသတျတှဟော နာကငျြစရာ …